च्यालेन्ज पछी राजेन्द्र खड्गी र जयकिशन बस्नेत एकैसाथ मिडियामा ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
May 9, 2021 AdminLeaveaComment on च्यालेन्ज पछी राजेन्द्र खड्गी र जयकिशन बस्नेत एकैसाथ मिडियामा ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
काठमाडौं । राजेन्द्र खड्गी नेपालको पहिलो र एक मात्र त्यस्ता द्व’न्द्व निर्देशक हुन् जसले अहिलेसम्म ५ सयभन्दा धेरै नेपाली चलचित्रमा द्व’न्द्व निर्देशन गरेका छन् । उनी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा लागेदेखि द्वन्द्व निर्देशनमा निरन्तर एकछत्र रुपमा राज गर्ने द्वन्द्व निर्देशकमा पर्छन् । उनको द्वन्द्व निर्देशनको यात्रा ३३ वर्ष भयो ।
उनको पहिलो चलचित्र थियो विश्वास । चेतन कार्कीको निर्देशनमा बनेको चलचित्र विश्वासबाट उनले ब्रेक लिएका हुन् । विश्वासमा उनले कराँतेका दुईवटा फाईट कम्पोज गर्ने मौका पाएका थिए । राजेन्द्रले दैनिक २० तोला सुन लगाउँछन् यो कुराले धेरैलाई छक्क पनि पार्छ । अहिले नेपाली बजारमा भएको सुनको बजार भाउ हेर्ने हो भने लाखौको सुन राजेन्द्रको शरीरमा छ ।
पुर्व राजपरिवारसंग पनि राम्रो सम्बन्ध बनाएका राजेन्द्रको घरमा विरेन्द्रका कान्छा छोरा निराजनले प्रयोग गर्ने महंगो गाडी नै छ । जुन राजाले उनलाई उपहार स्वरुप दिएको बताइन्छ । उनले आफ्नो घरको डिजाइन आफै गरेका हुन् । पोखरा फेवा लेकमा फिल्म छायांकनमा जाँदा उनले त्यहाँ एउटा घर देखेका थिए।
त्यो घर देखेपछि उनलाई लाग्यो मैले पनि यस्तै घर बनाउँछु भन्ने लागेको थियो । काठमाडौ आएपछि उनले भुकम्प गएपछि त्यस्तै डिजाइनको घर बनाएको उनको घरमा घर भित्र नै सुइमिगं पुल छ । घर भित्र नै मन्दिर समेत रहेको छ । उनै खड्गी बेला बेला समसामयिक विषयमा पनि आफ्नो विचार राख्ने गर्दछन ।
युट्युबमा आफ्नो भनाई राख्ने क्रममा राजेन्द्रको अर्का कलाकार जय किशन बस्नेतसंग वि.वाद उत्पन्न भएको छ । उनीहरुले एकआपसमा ध.म्कीपूर्ण भाषा समेत बोलेपछि वास्तविकता बुझ्न चर्चित कार्यक्रम ग्ल्यामर गफमा प्रकाश सुबेदीले दुवैलाई उपस्थित गराएका छन । थप कुरा भिडियोमा यहाँबाट हेर्नुहोसः
भोलिको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल जेठ १२ गते बुधबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ मे २६ तारिख